Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Industrylọ Ọrụ Ọbịa » Hotel Pennsylvania dị na Manhattan dabara na COVID-19
Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Otu ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ dị n'etiti Manhattan na-emechi ụzọ ya maka ọdịmma. Ụlọ nkwari akụ Pennsylvania agaghị emepe, na-adaba na ọrịa COVID-19 nke afọ gara aga na afọ nke izere ihe mgbochi. Hotellọ nkwari akụ nke anọ kacha na New York City dị mma, nke dị n'ihu Madison Square Garden na Penn Station, na-eme ka ọ bụrụ ebe dị mma na ọnụ ala maka ndị njem na ndị na-eme egwu.
Pennsylvania Railroad wuru ụlọ nkwari akụ ahụ ma mechaa nweta ya site na Statler Hotels, wee bụrụ Hotel Statler.
E degharịrị ụlọ nkwari akụ ahụ ka erechara ya Conrad Hilton na 1954 mgbe ọ ghọrọ The Statler Hilton wee gbanwee gaa na New York Statler mgbe erechara ya na 1979.
Mgbanwe ole na ole ọzọ nke nwe gbanwere aha ya na New York Penta, naanị n'ikpeazụ mechaa metamorphosis ya laghachi na Hotel Pennsylvania.
Ụlọ nkwari akụ Pennsylvania rụrụ site na Railroad Pennsylvania wee rụọ ọrụ site na Ellsworth Statler. Ọ mepere na Jenụwarị 25, 1919, William Symmes Richardson nke ụlọ ọrụ McKim, Mead & White mebere ya, nke rụkwara ọdụ Pennsylvania mbụ dị n'akụkụ okporo ámá.
Hotler Statler, nke jisiri ike na Pennsylvania kemgbe e wuru ya, nwetara ihe onwunwe ahụ na Pennsylvania Railroad na June 30, 1948, wee nyegharịa ya Hotel Statler na Jenụwarị 1, 1949. E rere Conrad Hilton ụlọ nkwari akụ iri na asaa niile na 17 na ụlọ nkwari akụ ahụ ghọrọ The Statler Hilton na 1954. Ọ rụrụ ọrụ n'okpuru aha a ruo 1958, mgbe Hilton resịrị onye nrụpụta William Zeckendorf, Jr., ụlọ nkwari akụ ahụ maka nde $ 1979. E degharịrị ụlọ nkwari akụ ahụ aha New York Statler ma Dunfey Family Hotels, nke Aer Lingus rụrụ ya. A rere ụlọ nkwari akụ ahụ ọzọ maka nde $ 46 na Ọgọst 1983. Abelco zụtara ọmụrụ 50%, otu itinye ego gụnyere ndị mmepe Elie Hirschfeld, Abraham Hirschfeld, na Arthur G. Cohen, yana 50% ndị ọzọ nke ụdọ Penta Hotels zụtara. , njikọ aka nke British Airways, Lufthansa, na Swissair. Ndị nwe ọhụrụ ahụ gụgharịrị ụlọ nkwari akụ ahụ aha New York Penta wee rụọ nnukwu nrụzigharị. Na 1991, ndị mmekọ Penta zụtara osisi nke yinye na họtel ahụ wee weghachite ya na aha mbụ ya, Hotel Pennsylvania.
Enwere akụkọ ihe mere eme nke ọma na nnukwu ụlọ nkwari akụ a, ọkachasị "Pennsylvania 6-5000" nke Glenn Miller Orchestra. Ruo mbido Mee 2021, ị ka nwere ike ịkpọ 212-PE6-5000, wee nụ mmegharị ahụ "Pennsylvania 6-5000" tupu ijikọ na onye ọrụ. Ọ bụ ogologo oge na -aga n'ihu iji nọmba ekwentị na New York. Site na mgbe ị kpọrọ ụlọ nkwari akụ ahụ, egwu na akụkọ ihe mere eme na -akpọ gị oku ka ị cheta ọmarịcha ụlọ nkwari akụ Pennsylvania.
Café Rouge bụbu nnukwu ụlọ oriri na ọ Hotelụ inụ na Hotel Pennsylvania. Ọ rụrụ ọrụ dị ka ụlọ oriri abalị ruo ọtụtụ afọ, mana ugbu a ọ na-arụ ọrụ dị ka ebe dịpụrụ adịpụ na họtel ahụ kpamkpam, dị ka oghere nwere ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụ naanị oghere n'ime ụlọ nkwari akụ ahụ gbanahụrụ mgbanwe dị ukwuu n'oge nrụzigharị ụlọ nke 1980s.
N'ọgwụgwụ afọ 1930 na mbido 1940, The Café Rouge nwere nnukwu njikọ dịpụrụ adịpụ na NBC Red Network (mgbe 1942 gasịrị, NBC Radio Network) wee bụrụ onye ama ama maka mmemme ndụ a na -eme n'ime. Ọtụtụ ndị na -ese ihe na -egwuri egwu na Café - dị ka The Dorsey Brothers, Wood Herman, Count Basie, Duke Ellington, na The Andrews Sisters.
N'otu uhuruchi na Nọvemba 1939, mgbe ọ nọ n'etiti njikọ aka ogologo oge na Café Rouge, onye na-eme ihe nkiri bụ Artie Shaw hapụrụ ebe a na-adọba ụgbọala n'etiti setịpụrụ wee kpebie na o zuola azụmahịa azụmaahịa na ụdị echiche niile nke ịbụ, n'ime otu afọ na ọkara, onye ndu otu egwu kacha ewu ewu na mba ahụ. Shaw kwụsịrị ọrụ egwu ya ozugbo, ihe a na -amanye ndị New York Times ịza ajụjụ na nchịkọta akụkọ.
N'ime 1940-42, ndị otu egwu Glenn Miller nwekwara ọtụtụ akwụkwọ ogologo oge n'ime ụlọ n'ime afọ atọ nke profaịlụ Miller kacha elu dị ka onye na-achịkọta ụda. Mgbasa egwu ndị Miller si na Café; RCA Victor dekọrọ ụfọdụ. Onye isi egwu Shaw site na 1937-39, Jerry Gray, Miller were ya n'ọrụ ozugbo ka ọ bụrụ onye nhazi ndị ọrụ mgbe Shaw hapụrụ otu ya; ọ bụ n'oge njikọ Miller n'afọ 1940 n'ụlọ nkwari akụ ka Gray dere egwu "Pennsylvania 6-500" (ya na okwu Carl Sigman mechara tinye ya) jiri nọmba ekwentị Hotel, 212-736-5000, nke bụ ekwentị New York. Nọmba nke iji ogologo oge na -aga n'ihu, ndị otu Les Brown, ya na onye na -agụ egwu Doris Day, webatara egwu ha "Njem Sentimental" na Café na Nọvemba 1944.
Kọmịshọna Nchekwa Ala nke New York tụlere Café Rouge maka ọkwa ala dabere na akwụkwọ nyocha nke Hotel Pennsylvania Preservation Society (nke bụbu Save Hotel Pennsylvania Foundation) mepụtara. Na Ọktọba 22, 2010, a jụrụ Café ka ọ bụrụ onye ndoro -ndoro ala, ikekwe n'ihi na akwadoro ọrụ Penn Plaza na nke na -agafeghị oke, mana ọ bụghị mgbanwe na -emebi ihe n'ime ime kemgbe arụchara ya. Ihe oru ngo Penn Plaza iri na ise ga -agụnye mbibi nke Café.
Ọtụtụ n'ime ihe ndozi ime ụlọ mbụ ka dị. Ntọala na okpokoro chara acha na nkọwa nkọwa ihe owuwu ndị ọzọ ka dị, n'agbanyeghị na agbachaala ụlọ ahụ dum, yana elu ụlọ. Ọtụtụ ihe omume sitere na New York Fashion Week nke 2013 ka emere na Café Rouge.
N’afọ 2014, a gbanwere Café Rouge ka ọ bụrụ ogige basketball ime ụlọ a na -akpọ Terminal 23, iji cheta mmalite Melo M10 site na ngalaba Jordan Brand nke Nike. Ọ na -enye ohere maka ndị ntorobịa na ndị egwuregwu ụlọ akwụkwọ sekọndrị.
Harry Styles "Ịhụnanya na njem" Met Finale
Mịnịsta ahụike Canada nkwupụta ngwa ngwa maka ọhụrụ…
Doris Dabish ekwu, sị:
Ọnwa Nke Asatọ 28, 2021 na 22:02
Ọ dị nwute ịhụ ya nso, gara ọtụtụ nzukọ ọmụmụ ahụike ebe ahụ n'ime afọ 35 gara aga. Ọ bụụrụ anyị ebe nzukọ kemgbe afọ iri ise.